Sony Bravia bug uye bias mwenje inodzima uye kudzima inoita kunge isingaite - MediaLight Bias Mwenje
Sony Bravia bug uye bias mwenje inodzima uye kudzima inoita kunge isingaite kana TV yadzimwa.
Iwe wawana peji rino nekuti mwenje wako wekusarura unoramba uchitenderera kana yako Sony Bravia yadzimwa.
Nhau dzakanaka ndedzekuti hapana chakashata nemwenje yako yekusarura.
Nhau dzakaipa ndedzekuti pane nyaya inozivikanwa neTV iyo yanga isati yave (uye zvichida haizove) yakagadziriswa naSony (chinongedzo kuGitHub).
Tinoda kutenda mutengi akangwara, Josh J., anga achisangana nematambudziko akakonzeresa gudzazwi yake kudzvanya pese paibuda Bravia uye ichibva nekuda kweBravia Standby Bug. Kuongororwa kwemaforamu epamhepo kwakamuendesa kugadziriso iyo, zvakangoitikawo, zvakare inogadzirisa iyo Bravia Standby Bug yemwenje wekusarura. Verenga iri pfupi peji kuti unzwisise bug uye uone kuti izvo gadziriso zvichaitei.
Pamwe iwe wawana peji ino nekuti paunogonesa MediaLight yako kubva kuUSB port pane yako Sony Bravia, mwenje iri kudzima uye kudzima zvisina basa kana TV yadzimwa. Zvinogumbura!
"Ko mamwe marobhoti haadzimi neTV here?"
Kwete. Mamwe marangi emwenje anodzimwa chete kana akasunungurwa kana kubviswa simba. Ndozvamungatarisira. Ukaburitsa rambi, rinodzima. Ipake iyo mukati uye inodzokera kumashure. Rambi harisi kuita chero chinhu. Iri kungovhenekera kana simba radzoserwa.
Yese Sony Bravia TV inoita izvi.
Ndicho chimwe chikonzero nei tichisanganisira kure kure kutonga neMediaLight Mk2 Flex yese. Iyo MediaLight yatove yakarongedzwa mune mazhinji smart hubs uye remotes inosanganisira iyo Logitech Harmony ecosystem.
1) Shandisa simba rekunze uye chirongwa chedu kure kune yako smart kure kana hub.
2) Kana simba MediaLight yako kubva kuTV, chinja iyo RS232C yekudzoreredza kuita "serial," uye kudzima mwenje neMediaLight kure kana smart hub kana yepasi kure.
Heano mirairo yekushandura yako RS232C port mode kuita serial. Kana yapera, TV inozotangazve.
Enda kumenu yeGoogle nezvose zvirikuonekwa. Iwe unogona kazhinji kusvika ipapo nekudzvanya pane "Kumba" bhatani pane yako Bravia kure. Sarudza iyo "Zvirongwa" sarudzo kumusoro kwekurudyi kwescreen (iyi menyu inogona kuchinja neremangwana Android TV inogadziridza)
Bhura pasi pasi kune "Network uye Zvishongedzo" chikamu cheMisetwork uye iwe uchaona chinhu chinonzi "RS232C kutonga." Sarudza iyo.
Pasi pechikamu cheRS232C chekutonga, sarudza "Via serial port."
TV yako ichatangazve mushure mekusarudza izvi, uye kana iwe uchinge waita izvi, mwenje unosara yakavhurwa kana TV yadzimwa. Iwe unogona ikozvino kuvimbika nekuvhenekera mwenje nekuvhenekera nehungwaru hub, wepasi rese kure, kana iyo yekudzivirira kure iyo yatakasanganisira neMediaLight Bias Lighting System yako.
Ndokumbira utarise: Android TVs dzimwe nguva inoita zviito kumashure, senge firmware kurodha pasi uye kutangazve, uye zvinokwanisika kuti mwenje inogona kuramba ichidzima pazviitiko zvisingawanzoitika, asi haizovhure nekudzima isingaregi, haizokonzere kudzikira kubwaira uye ichagara ichiteerera kure kure mirairo.
Saka, zvinorevei izvi ndezvekuti kana iwe uine bias mwenje unosanganisira kure kune iko iko iko iko kushanda kune iyo Bravia yekumira bug. 👍